कसरी PR6 ब्याकलिङ्कहरूले तपाईंको साइट एसईओलाई असर गर्न सक्छ?
सबैलाई थाहा छ कि गुणवत्ता इनबाउन्ड लिङ्कहरू निर्माण गर्न उत्तम स्रोत उच्च पेजरैंक डोमेनहरू हुन्. उनीहरूले तपाइँको खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनलाई बढावा दिन र खोजी नतिजा पृष्ठमा आफ्नो स्थिति सार्नु पर्ने काम गर्दछ.
ब्याकलिङ्क प्रोफाईल सिर्जना गर्न सुरु गर्नु अघि, तपाईंले PR6, PR7, र अन्य खोज इञ्जिन साइटहरूको बारेमा खोजी र जाँच गर्न आवश्यक छ।. PageRank एक महत्वपूर्ण रैंकिंग कारक हो जसले वेबसाइट प्राधिकरणलाई देखाउँदछ. यसले लिंकको संख्या र गुणस्तरको गणना गरेर वेब पृष्ठको महत्त्वलाई मापदण्ड गर्दछ. अन्य शब्दहरुमा, गुगल द्वारा साइटमा स्थान निर्धारण गर्न Google द्वारा अपनाईएको जटिल ग्रेडिंग प्रणाली हो. न्यूनतम PageRank शून्य छ, र अधिकतम एक दस हो. हाम्रो दिनहरूमा, पेजरङ्कले वेबसाइट सफलताको एक मात्र मापको रूपमा सेवा गर्दैन. यो न त एक उच्च खोजी रैंकिंग को गारंटी दिन्छ, न त यातायात मा वृद्धि.
तथापि, उच्च PR साइटहरु बाट ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न अझै पनि तपाईंको लिङ्क निर्माण प्रोफाईल सुधारको लागि आवश्यक छ. गुगल उच्च पृष्ठरङ्कासँग सम्मानित र लामो अवस्थित वेब स्रोतहरू मात्र पुरस्कार दिन्छ. यसैले ब्याकलिंकहरू सिर्जना गर्दा तपाईंको सामग्री मानको बारेमा Google लाई बताउनेछ. यदि तपाईंको लिङ्क प्रोफाइल PR6 - PR10 पछाडिको लिंक हो भने, तपाईं Google TOP मा स्थान दिनुहुनेछ.
प्रविधिहरू PR6 ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्नका लागि
तपाईंको प्रतिस्पर्धी ब्याकलिङ्कहरू
तपाईको एक मात्र वेबमास्टर मात्र होइन जुन राम्रो लिङ्क प्रोफाइल सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ. तपाईंको शीर्ष स्थानको प्राय: वेब वेब स्रोतहरुसँग बलियो लिङ्क निर्माण अभियानहरू छन् र लगातार नयाँ लिङ्क निर्माणको अवसर खोज्दै छन्. यसलाई विश्वास गर्नुहोस् वा होइन, तपाईं आफ्नो प्रतियोगी ब्याकलिङ्कबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ. तिनीहरूले तपाईंको लागि सबै लिङ्क निर्माण कार्य गरेका छन्. त्यसोभए, तपाइँलाई आवश्यक सबै चीजहरू RLR ढाँचाका साथ प्रतिस्पर्धी ब्याकलिंकमा छ.
तपाईलाई प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ र तपाईको प्राथमिक प्रतियोगी लिङ्कहरू निर्माण गर्दै कसरी पत्ता लगाउँदछ. र अन्तमा, तपाईंलाई प्रतिकृया गर्न वा केवल उनको रणनीति उधारो चाहिन्छ. तपाई स्रोतहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँका प्रतियोगिहरूले उनीहरूको लिङ्कहरू सिर्जना गरेका छन् र लिङ्क निर्माणको अवधारणाहरू सोध्छन् तपाईंको डोमेनको लागि.
तपाईले यो सुबिधा लिङ्क निर्माण प्रविधिको बारेमा शानदार एसईओ विशेषज्ञ ब्रायन डानको बारेमा सुन्नुभएको छ।. यो सरल छ, तर उत्कृष्ट परिणामहरूसँग वेबमास्टरहरू प्रदान गर्नुहोस्.
सबै भन्दा पहिले, तपाईंलाई बजार आला अनुसन्धान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ र लोकप्रिय र अत्यधिक लिङ्क गरिएको लेखहरू वा पोष्टहरू खोज्नु पर्दछ।. त्यसपछि तपाईंले आफ्नो सामाग्री टुक्रालाई पढ्नु भएको सामग्रीबाट प्रेरित गर्न आवश्यक छ. तथापि, तपाईंलाई प्रतिलिपि-पेस्टिङबाट टाढा राख्न आवश्यक छ किनभने यो तपाईंको विरुद्ध खेल्नेछ. तपाईले तपाइँको अनुसन्धानको आधारमा एक अद्वितीय लेख सिर्जना गर्नुपर्छ. त्यसपछि तपाइँ पुरानो लेख संस्करणमा लिंक राख्न आवश्यक छ कि प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको नयाँ अद्यावधिक गरिएको सामग्री टुक्रामा बदल्न सक्दछ.
शटनगन स्किस्पर प्रविधी
यो लिङ्क निर्माण प्रविधि अघिल्लो. यद्यपि, यसको एक फरक फरक छ. यसले ती व्यक्तिहरूको लागि सर्वोत्तम काम गर्दछ जुन पहिले नै सामाग्रीको टुक्रा हो जसलाई पदोन्नति गर्न आवश्यक छ. यस अवस्थामा, तपाईंलाई लिङ्कका अवसरहरूको लागि धेरै स्किस्क्र्यापर्सहरूमा निर्भर रहनु पर्दछ. यो प्रविधिले तपाइँलाई त्यहि विषयवस्तुको आधारमा अन्य वेब पृष्ठहरूको गुच्छा पाउनको लागि मौका दिन्छ जुन उनीसँग धेरै लिङ्कहरू छन्। Source .